INingizimu Afrika ithola umuthi wokugoma – ngenani elithile | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika ithola umuthi wokugoma – ngenani elithile
INingizimu Afrika isemgqeni wokuthola umuthi wokugoma i-Oxford-Astrazeneca, kodwa ngentengo ephezulu.
Izwe kulindeleke ukuthi likhokhe cishe okuphindeke kabili nohhafu kulokho amazwe amaningi ase-Europe asekukhokhile ukuthola umuthi wokugoma i-Oxford-Astrazeneca.
“UMnyango wezeMpilo kuZwelonke uyakuqinisekisa ukuthi intengo yemali eyi- $ 5.25 yilokho esikutsheliwe,” kusho u-Anban Pillay, iPhini likaMqondisi Jikelele wezeMpilo.
Ngemali yaseNingizimu Afrika sizokhokha cishe imali engama-R80 umthamo ngamunye kanti amazwe ase-Europe azokhokha cishe imali engama-R33.
Lezi zindaba zifika ngemuva kwamaviki amabili uhulumeni ememezele ukuthi uthenge imithamo eyi-1,5m yomuthi wokugoma e-Serum Institute of India.
Lokhu kuletha umthethosivivinyo sezwe jikelele cishe emalini eyizigidi eziyi- $ 8 million dollars noma cishe izigidi ezingama-R120m.
UPillay uthe intengo ephezulu yingoba amanye amazwe anikele ocwaningweni nasekuthuthukisweni. Lo mbuzo uthi kwenzekani kubantu baseNingizimu Afrika abayizi-2 000 ababebambe iqhaza ocwaningeni lezokwelashwa lomuthi wokugoma ngowezi-2020?
Ngenkathi izwe lizokhokha kakhulu kunalokho obekulindelwe ngaleyo mithamo iMelika imemezele ukuthi isijoyine uhlelo lwe-Covax oluvula umnyango wemigomo eminingi.
Uhlelo lwe-Covax lubeka uhlelo lwezimali zomhlaba wonke zokuthenga imithi yokugoma futhi isatshalaliswe ngokulinganayo emhlabeni jikelele.
Lesi ngesinye sezenzo zokuqala zikaMengameli waseMelika uJoe Biden futhi iMelika ijoyine impi yomhlaba yokulwa nalolu bhubhane.
OwayenguMengameli, uDonald Trump, ubehluleka njalo ukubhekana nomthelela waleli gciwane ezweni lakhe ayiphathwake eyomhlaba wonke.
Lesi sinyathelo sibonisa ushintsho olukhulu kunqubomgomo yezangaphandle yaseMelika, ukubuyisela izwe elicebe kakhulu emhlabeni esigabeni samazwe omhlaba.
U-Anthony Fauci, onguMqondisi we-National Institute of Allergy and Infectious Diseases eMelika, umemezele lesi sinyathelo enkulumweni yakhe ayethule kwi-World Health Organisation ngoLwesine ekuseni.
I-Covax kulindeleke ukuthi ihambise imithamo yayo yokuqala ngenyanga ezayo, kanti lolu hlelo lubekelwe ukuhlinzeka ngemithi yokugoma eyenele yokuthwala izigidigidi ezimbili kulo nyaka okungaba ngu-20% wabantu bamazwe angamalungu awo.